Cristiano Ronaldo vs Lionel Messi: Kumaa ku guuleystay koobab badan oo waaweyn Horyaalka Italy
Home Horyaalka Italy Cristiano Ronaldo vs Lionel Messi: Kumaa ku guuleystay koobab badan oo waaweyn
Cristiano Ronaldo iyo Lionel Messi si dabiici ah labadooduba waxay soo mareen shaqooyin koobab badan, iyagoo had iyo jeer koobab waaweyn la qaada kooxahooda. Labada Super Star ayaa si weyn saameyn ugu yeeshay guushoodii kooxahoodii sanadihii la soo dhaafay waxaana si weyn loo aqoonsan yahay inay ka mid yihiin kuwa ugu fiican waqtiga oo dhan sababtaas darteed.
Labo maalmood ka hor, Cristiano Ronaldo ayaa ka caawiyay Juventus inay ku guuleysato koobkeedii sagaalaad ee Supercoppa Italiana, isagoo wadar ahaan koobabkiisa u qaaday 33 koob . 33-kan ka mid ah, Cristiano Ronaldo wuxuu kula guuleystay 2 xul Portugal, 1 Sporting Lisbon, 10 Man United, 16 Real Madrid iyo 4 Juventus. Cristiano Ronaldo ayaa sidoo kale noqday hogaamiyaha gool dhalinta taariikhda kubada cagta kadib markii uu dhaliyay goolkiisii ​​760-aad ee xirfadiisa ciyaareed.
Dhanka kale, Lionel Messi ayaa keensaday koobab fara badan kooxda Barcelona tan iyo markii uu bilaabay u ciyaarista kooxda reer Catalan. Guud ahaan, Lionel Messi wuxuu kula guuleystay 36 koob oo waaweyn koox iyo dal, 34 ka mid ah wuxuu la yimid Barcelona iyo 2 oo uu u qaaday Argentina (U-20 Koobka Adduunka iyo billada Dahabka ee Olombikada – oo labadaba loo arko guullo waaweyn).
Halkee ayey ka taagan yihiin Cristiano Ronaldo iyo Lionel Messi xidigaha ku guuleestay koobabka ugu waaweyn.
# T9 Xavi – 33 koobab waaweyn
# T9 Cristiano Ronaldo – 33 koob oo waa weyn
# T7 Vitor Baia – 34 koobab waaweyn
# T7 Gerard Pique – 34 koobab waaweyn
# 6 Kenny Dalglish – 35 koobab waaweyn
# T4 Ryan Giggs – 36 koobab waaweyn
# T4 Lionel Messi – 36 koobab waaweyn
# T2 Maxwell – 37 koobab waaweyn
# T2 Andres Iniesta – 37 koobab waaweyn
# 1 Dani Alves – 42 koob oo waa weyn
Previous articleChelsea oo isha ku heysa inay u dhaqaaqdo daafaca kooxda Ajax
Next articleWararka Suuqa kala iisbiga iyo Wargeysyada Yurub ee Caawa: Mbappe oo cadeeyay koox uu doonayo iyo qodobo kale